Tirada dadka ku dhintay qaraxyada Sri Lanka oo sii kordheysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Aaskii dad ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacey axaddii dalka Siiri Laanka. sawir: Gemunu Amarasinghe
Tirada dadka ku dhintay qaraxyada Sri Lanka oo sii kordheysa
La daabacay tisdag 23 april 2019 kl 12.48
Laba maalmood ayaa ka soo wareegtay markii ey dalka Sri Lanka ka dhaceen qaraxyo dhowra oo dhimasho iyo dhaawacyaba geystay. 310 qof ayaa illaa iminka ku geeriyoodey, sida uu sheegay boliiska dalkaasi.
Waxa wali socda raadinta cidda falkan ka danbeysey iyadoo la soo qab qabtay dad gaaraya 40 kuwaasoo lagu tuhunsan yahay iney ku lug lahaayeen qaraxyada.
Qaar badan oo ka mida shacabka ku nool caasimada dalkaas ee Colombo ayaa iminka ku sugan xaalad baqdin leh.
– Waan baqayaa iminka markan u socdo shaqada, ayey tiri Erandi mar ay ku socotay goobta ay ka shaqeyso ee ku taal magaalada Colombo, mar ay u warrantay laanta wararka Ekot.
Hey’adaha dalka Sri Lanka ayaa tilmaamaya koox islaamiyiina ee dalkaasi iney ka dambeeyeen weeraradii la geystay axaddi.
Waxaa kaloo la sheegayaa iney u badan tahay in kooxdani ay dalka dibadiisa ka heshay taageero dhaqaale iyo mid qorshaha fulinta falkan maadaama weeraradu ahaayeen kuwo u baahnaa waaya aragnimo, lacag iyo dad badan oo ka qeyb qaata.
Ra’iisal wasaaraha Sri Lanka ayaa qiray in ciidanka ammaanka ee dalkaasi laba todobaad ka hor uu helay digniin ku saabsan iney koox islaami ahi qorsheyneysay weeraro lagu qaado kaniisadaha dalkaa isagoo ku celceliyey in la baaro sababta arintaa wax looga qaban waayey.
Waxaa la ogsoon yahay in xiriirka ka dhaxeeya ra’iisal wasaaraha iyo madaxweynuhu aanu wanaagsaneyn iyadoo khilaafka dhexyaal labada madax keenay inaan ra’iisal wasaaraha lagu wargelin howlaha la xiriira sirdoonka dalka.
Stimido oo ka shaqeeya xafiis ku yaal bartamaha caasimadda Colombo ayaa u arka in amnigu soo noqonayo iyo in loo baahan yahay taxadir.
Baaritaan hordhaca ee la xiriira qaraxyadda ayaa muujinaya in falkaasi ahaa mid loogu aar gudayo weerarkii bishii maarso loo geystay masaajidda Christchurch ee dalka New Zeeland.
Trevo Buultjens, gudoomiyaha ururka dadka ka soo jeeda Sri Lanka ee ku nool Sweden ayaa qaraxa ka dhacay Sri Lanka uu naxdin weyn ku reebay.
– Qaraxa ayaa shoog inagu abuuray. Waxan ku tala jirnaa inaan baaq soo gudbino dhamaadka todobaadkan, ayuu yiri gudoomaha.